Izindaba & izenzakalo Factory, Suppliers - China Izindaba & izenzakalo Abakhiqizi
Ifoni: + 086-025-57866111
Siphetfo esiphelele CIMT2017 Jianke emisha kukhanya lolungenamaphutsa
umlawuli ku 18-05-05
Kusukela ngo-Ephreli 17 ukuze 22, ka-15 China International Machine Ithuluzi Fair (CIMT2017) kanye isihloko "funa entsha, ukuthengisela entsha, namandla amasha" wawuba ngasekuqaleni Beijing China International Exhibition Centre (hholo elisha). Njengoba umcimbi emhlabeni njengomuntu onethonya elikhulu kakhulu embukisweni umshini ithuluzi umkhakha e th ...
Akukho ekwenziweni ngaphandle kokuphula] Jianke Machine Ukubhujiswa Ceremony
umlawuli ku 18-01-22
kweminyaka eyishumi izulu lina futhi kuneziphepho, breaking indlela idabule ejikijolweni somkhaya Eminyakeni eyishumi besebenza kanzima, elwa engapheli. Eziyishumi neminyaka enezigigaba nezinyanga ukwenza impumelelo ekhaliphile. Ngo 2018, kwaba ukuphela iminyaka eyishumi kohambo olukhandlayo Nanjing Jianke Imishini. Ngo 2018, liphinde sokuqala po entsha ...
Jianke ukumema ukuba ube khona 15th China International Machine Ithuluzi Fair
umlawuli ku 17-04-15
Jianke kuzoletha umkhiqizo wokuqala China sika, WS20-8 ayisishiyagalombili-oluvala amasondo lathe isikhungo-elawulwa, ukubamba iqhaza 15th China International Machine Ithuluzi Fair. Thina ngobuqotho umeme amakhasimende amasha namadala ukuvakashela futhi beluleke indawo! Bembonisa isikhathi: Apreli 17-22, 2017 Umbukiso: Beijing China inte ...
Amadivayisi: No.72, Fengshan Road, Gaochun Economic Development Zone, Nanjing, China